Marar badan hubsiimo la’aantu waxay sababtaa mashaqooyin laga maarmi lahaa haddii la kaashan lahaa daganaanta (Lasoco Qeybta 2 ) – SoomaliMedia
Previous Qormo Gaaban Oo Waa Maan-gal Ah (WQ: Faysal GELE)
Next Faaiidada ; Doorashada iyo ka qeeyb galida Codeeynta
Marar badan hubsiimo la’aantu waxay sababtaa mashaqooyin laga maarmi lahaa haddii la kaashan lahaa daganaanta (Lasoco Qeybta 2 )
“Marar badan hubsiimo la’aantu waxay sababtaa mashaqooyin laga maarmi lahaa haddii la kaashan lahaa daganaanta.”
Dadka wada nool, dariska, inta wax wada barata iyo kuwa saaxiibada ah ama xataa inta ku kulanta safarada waxa kala qabsada culaysyo iyo is fahmiwaa salka ku haya ama ka dhasha fudayd dhinaca ficilka ama hadalka ah.
Hadaba waxaa haboon inta aadan jawaabta fal celinta ah bixinin in aad ka hor mariso su’aal dagan oo ku wajahan waxa dareenkaagu dhibsaday, taasoo laga yaabo in ay kaa baajiso natiijo xumada ka dhalan karta go’aan sal fudayd ku dhisan.
Nin ayaa maalin raacay tareen (Train) wuxuu yidhi waxay ahayd maalin farxadeed hawaduna aad u dagan tahay, dadkuna ay ahaayeen qaar wax akhrisanaya, qaar dhagaha wax ugu jiraan oo wax dhagaysanaya iyo qayb iska aamusan.
Goob kamida goobaha Tareenku istaago ayaa waxaa naga soo raacay nin saddex carruura oo yaryar wata, mar kaliya ayaa jawigi daganaa is badalay. Carruurti ayaa qaylo bilowday iyo in ay isku eryadaan tareenka gudihiisa iyo waliba in ay ka dafaan dadka buugaagti ay akhrisanayeen.
Xasilooni darro iyo xiisad ayaa ka oogantay meeshi, waxaana abuurmay dareen dhibsi iyo karaahiyo xanbaarsan. waxaan eegay ayuu yidhi ninki carruurta watay oo dhinacayga fadhiya wuxuu isku haystay labadiisa indhood wuxuuna ku tiirsanaa kursigiisa, umana muuqan nin ku baraarugsan fadqalalada iyo fawdada ay carruurtiisu ku hayaan rakaabka.
Si cadha leh ayaan ugu idhi:
“Waar miyaadan dareen lahayn maad ka qabatid caruurta daka? waa maxay waxa aad samaynayso? ma indhahaad laa’dahay!? war bal ninkan wayn eega dhaqankiisa.”
Wuxuu yidhi ninki ayaa sidagan iigu jawaabay oo yidhi:
“Cafwan, maskax ahaan ayaan mashquulsanaa oo carruurtan hooyadood ayaan maalmahan cusbitaal kula jiray saaka aroortii ayayna geeriyootay, raali ahaada hadda ayaan fadhiisinayaa carruurta.”
Ma xaaskaagi ayaa saaka geeriyootay ayaan si naxdin leh u waydiiyay?.
Ninki qisada ka sheekeeyay wuxuu yidhi;
“Waxaan aad uga murugooday sidii adkayd ee aan ula hadlay ninka, aniga oon hubsanin waxa ku kalifay in uu ogaan waayo dhibka ay gaysanayaan carruurtiisu.”
Markaliya ayaa jawigi cadhada iyo xanaaqa la kacsanaa uu isku badalay murugo iyo in loo tacsiyeeyo ninkii ciilka loola bakhtiisnaa ee lagu tuhun sanaa xilkasnimo darada. Dulucda maqaalku waa ka hormari hadalkaaga iyo ficilkaaga hubsiino. Soomaaliduna hore ayay ugu maah maahday:
“Hubsiimo hal baa la siistaa.”
Waxa Qoray Faysal Gele